अलिबिदा समन! - Blogs of Sagar Prasai
४ बर्ष जति भयो क्यार- त्यो बेलामा म काक्तायनी चोकमा बस्थे। त्यो बेला खासै काम हुदैनथ्यो। धेरै जसो फुर्सद नै हुन्थ्यो। फुर्सदमा म मज्जाले फिल्म हेर्थे। त्यो बेला घरमा त्यसतो फास्ट ईन्टरनेट थिएन- टोरेन्टबाट फिल्म डाउनलोड गर्न भन्दा ३० रुपैया तिरेर डिभिडी नै किनिन्थ्यो। तर हामी बसेको एरिया तिर राम्रा डिभिडी पसल नै थिएनन्। डिभिडी किन्न नया बानेश्वर चोक पुग्नुपर्ने- त्यो पनि फुटपाथमा! बेच्ने मान्छेको भर नै नहुने, उसलाई मनलागे बेच्न बस्थ्यो, नत्र बस्दैनथ्यो। यस्तो मा किनेर डिभिडी हेर्न पनि हामीलाई समस्या हुने गर्थ्यो।
त्यसतैमा एकदिन सँगै बस्ने मेरो भाई (मामाको छोरा)ले खबर लिएर आयो-"पुरानो बानेश्वर चोकमा नया डिभिडी पसल खुलेछ नि!" यो खबरले हामी फिल्मका पारखी एकदमै खुशी भयौँ। त्यसको एकदुई दिन पछि- म त्यो नया डिभिड पसल पुगे। पसले पनि हामी जस्तै भर्खरकै केटा रहेछन्। नया नया पसल थियो- त्यसतो खास भिड थिएन। आउने ग्राहक सबै सँग ती पसले साथी मजाले कुरा गर्थे। सबलाई राम्रो फिल्महरूको नाम को सुझाव दिन्थे। जे होस् पहिलो भेटमा नै ती मान्छे मलाई मिजासिला लागे।
यसरी डिभिडी किन्न जाने क्रममा ती साथी सँग राम्रो चिनजान हुन थाल्यो। उनको नाम समन रहेछ। समनले हामीलाई धेरै फिल्महरूको बारेमा बताए। हामी त्यो बेला खासै हलिउडका सिनेमा हेर्दैनथियौँ- किनभने कुन सिनेमा राम्रो हो भनेर हामीलाई थाहा नै हुदैनथ्यो। त्यसकारण उनले हामीलाई हलिउडका फिल्म छान्न एकदमै मद्दत गरे। उनले दिएका फिल्महरू हामीलाई एकदमै मनपर्ने खालको हुन्थ्यो।
उनको पसल बाट फिल्म यति धेरै किन्न थालियो कि उनलाई मेरो फिल्मी रोजाईको बारेमा पनि पुरै थाहा हुन थाल्यो। म पुग्ने बित्तिकै भन्थे-"सागर सर, ल यो फिल्म हेर्नुस्। तपाईलाई एकदम राम्रो लाग्छ।" कहिलेकाँहि अलि दिन उनको पसल पुगिएन भने उनी फोन गरेर नै नया फिल्महरूको बारेमा जानकारी दिन्थे। उनले हामी राम्रो फिल्मको बारे कसरी थाहा पाउने भनेर बिभिन्न उपाय हरू सिकाउथे। IMDB र अरू फिल्मको रेटिङ्ग गर्ने साईटहरूको बारेमा पनि उनले हामी धेरै कुरा बताए।
बिस्तारै समन हामीलाई फिल्म बेच्ने मान्छे मात्रै नभएर, हाम्रो मिल्ने साथी पनि हुन थाले। उनको पसलमा गएर फिल्म किन्नका साथसाथै उनीसँग धेरै बेर गफ गरिन्थ्यो। प्राय जसो उनको मा म एकै पल्ट धेरै वटा डिभिडी किन्थेँ। तर उनले मुल्यमा अलिकति पनि छुट दिदैनथे। सधै भन्थे-"सागर सर, यार बरू तपाईलाई म चिया खुवाउछु तर यसमा डिस्काउन्ट नमाग्नुस्।"
साँच्चिकै उनको पसलमा उनीसँग गफ गर्दै धेरै पल्ट चिया पिईयो। जहिले पनि चिया पिउने बेलामा चुरोट सल्काउथे र भन्थे-"के गर्नु सर, आफ्नो त यी यस्तो खराब बानी छ।"
यसरी समन सँग चिनजान भएको करिब २ बर्ष जतिमा उनले पसल बेच्ने भए। यो कुराले हामी बहुत दुखी भयौँ। उनले भन्थे- "यसरी सिडि बेचेर भएन सर, अब अर्को अलि भरपर्दो काम गर्नुपर्यो।" र समनले पसल बेचेर गए।
उनले पसल एकजना प्रमोद भन्ने मधेशका मान्छेलाई बेचे। उनलाई हामी प्रमोद साउजी भन्थ्यौँ। प्रमोद साउजीको मा पनि हामी सिडी किन्न त जान्थ्यौ तर खोई समनको मा किनेको जस्तो मजा नै नआउने। प्रमोद साउजी आफैले अँग्रेजी फिल्म नेहर्ने भएर होला, उनलाई ईन्ग्लिस फिल्मको बारेमा खासै थाहा हुन्नथ्यो।
यो बेला सम्म घरमा पनि अलि फास्ट नेट राखिसकिएको थियो। समनले सिकाए अनुसार अब हामीलाई राम्रा फिल्मको बारेमा पनि थाहा हुनथाल्यो र घरमै फिल्महरू डाउनलोड गरेर हेर्न थालियो। यसरी प्रमोद साउजीको पसलमा धेरै कम जान थालियो।
यता समन सँग पनि कुराकानी पातलीयो। उसको नम्बर भएकाले कहिले काँहि फोनमा कुरा हुन्थ्यो। तर धेरै कम। अलि अगाडी एकपल्ट कुरा हुँदा समनले भन्थ्यो- बाहिर जाने ट्राई गर्दैछु सर! त्यसपछि समन सँग लामो समय कुरा भएको थिएन।
अस्तिको दिनमा हिड्दै गर्दा प्रमोद साउजीको पसलमा पुगे। यसो नया फिल्महरु हेर्न खोजे। उनले मालई हलिउडका केहि नया फिल्महरूका डिभिडी देखाए र भने- "यिनीहरूको डिमान्ड छ अहिले, राम्रो छ होला। अब मैले चाहि हेरेको छैन।"
मैले उनलाई भने-"पहिला समनले चाहि फिल्म हेर्ने हुनाले हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो।"
प्रमोद साउजीले भने-"समनको बारेमा पनि थाहा पाउनुभयो नि?"
मैले हल्का सँगै भने- के कुरा?
प्रमोद साउजी गम्भीर भए र भने-"भुईचालोमा बित्यो नि।!"
मलाई एक्कारी कस्तो करेन्ट लागे जस्तो भयो। हातमा हेरेको सरर काँडा उम्रियो। मैले सोधे-"हो र?"
प्रमोद साउजीले भने-" मैले पनि पछि मात्रै थाहा पाए। सिन्धुपाल्चोक गएको रहेछ, मामाघर। उतै परेछ।"
प्रमोद साउजीको यो कुरा सुनेर मैले केहि भन्न सकिन। डिभीडि नकिनि फर्किए। मलाई कस्तो भयो भयो- आफैलाई थाहा छैन। मन ग्वाँ ग्वाँ रोयो र आँखा रोएनन्। पसिना झर्यो र आँशू झरेनन्।
घर आईपुगेर मामाको छोरालाई भाईबरमा म्यासेज पठाएँ- "समन त बितेछ नि, भुकम्पमा परेर। कस्तो नराम्रो लागिरा'छ।"
पछि मामाको छोराले दक्षिण भारतबाट भाईबरमै लेख्यो-"समनले हामीलाई फिल्म हेर्न सिकाएर गयो जे होस्। उसको आत्माले शान्ति पाओस्।"
आज यो स्टाटस लेख्दा पनि भारी मनले समनलाई सम्झदै छु। अलिबिदा समन!